सम्बोधन बिनाको पत्र – News Portal
August 24, 2019 epradeshLeaveaComment on सम्बोधन बिनाको पत्र
खै कुन शब्दले सम्बोधन गरूँ तिमीलाई ? सम्बोधन गर्ने शब्दहरू त मबाट गलहत्याइसकेका छौँ तिमीले । तै पनि सम्बोधन बिनाका प्रेमका शब्दहरू तिमी समक्ष पु¥याउने कोसिस गरिरहेछु । जिन्दगीमा यो दिन पनि आउला भनेर सोच्न त के कल्पनासम्म गरेकी थिएन ।
समय यसरी मेरै अगाडि कोल्टो फेरेर तेर्सिन्छ भनेर । तर तेर्सियोस्, मेरै अगाडि केही छैन । सके लडेरै भए नि हिडौंला, नसके शहीद बनौला । दुःख के हो ? आँसु के हो ? पीडा के हो ? संघर्ष के हो ? सबको अनुभव छ मलाई । त्यसैले त अहिले जीउन सजिलो भएको छ ।
तिमीले भन्थ्यौ नि– जिन्दगी संघर्ष हो खुसीका साथ संघर्ष गर्नुपर्छ । कति रमाइला थिए है ती दिनहरू ! सम्बन्ध कति सुमधुर थिए लालीगुराँस जस्तै फुल्थे पत्रपत्रमा पोखिन्थे । भन्थ्यौ नि– आफू रोएर भए पनि तिम्रो आँखामा आँसु आउन दिन्न भनेर ।
तिम्रो मुस्कानले मेरो थकाइ मेटिन्छ । अझ भन्थ्यौँ– सूर्य तिमीतिरै उदाउने छ । तर त्यो सब त तिम्रा बाहना मात्र रहेछन् । के गर्नु, अहिले आफैले सूर्य नभएको रित्तो आकाशतिर हेरेर ताराहरूसँग मात्र चित्त बुझाइरहेछु ।
जिन्दगीका खुसी सपना रहरहरू भनेका त पाहुना मात्र रहेछन् जुन एकछिन मनको सोफामा आएर बस्छन् फेरि उसैगरी फर्कन्छन् । तिमी पनि कुनै दिन मेरो जिन्दगीमा एउटा प्रेमी लोग्ने भएर पनि जिन्दगीमा पाहुना बनेर आएका रहेछौ र उसै गरी फर्कियौ ।
तिम्रो अविश्वासको पर्खालले कत्ति पनि छेक्न सक्ने छैन मलाई । काखमा दुई सन्तानको उपहार दिएकै छौँ । यसैमा खुसी छु । तिमीले उनीहरुलाई बा भन्ने अधिकार खोसे पनि मैले कमि हुन दिने छैन ।
यिनीहरूलाई हुर्काउन बढाउन तिम्रो कुनै सम्पत्ति पनि खोस्न चाहन्न । सम्पत्तिको नाममा तिमी थियौँ । तिमी नै नभएपछि त्यो सम्पत्तिको के काम भयो र दुई हात खुट्टाका नङ्ग्रा खियाएर पाल्न सक्ने क्षमता छ मसँग ।
तिमी मबाट फर्किएर गए पनि तिमी प्रति कुनै गुनो छैन, कुनै दुखेसो छैन, न त निरास नै छ । अझ भनौ कुनै प्रश्न नै छैन । छ त केवल नदीजस्तै बगिरहने माया नै माया ।
तिमी फूल बन्नु, जुन बन्नु, मुस्कुराउनु । म त हरबखत आँशु तिम्रो नाममा बगाइरहेछु । तर यो नसम्झनु यो आँसु कायरताको हैन मात्र तिम्रै सम्झनाको । तिमीले त मलाई सजिलै भुल्न सक्यौँ तर म त जिन्दगी हरप्रहर तिम्रै नाममा बिताइरहेछु ।
तिमी जस्तो स्वार्थी क्रुरताको मन बोकेर बाँच्नै सकिन । तिमीले मबाट यो मेरो लोग्ने हो भन्ने अधिकार खोसेर लगे पनि मभित्रको चोखो पवित्र माया खोस्न सक्दैनौ म ढुक्क छु ।
मसँग तिमीले दिएका बहानाका प्रमाणपत्रहरू धेरै छन् । देखाऊँ त कसैले पत्याउदैन समाज जहिले पनि तिम्रै पक्षमा बोल्छ । हिजो पनि तिम्रै पक्षमा थियो आज पनि छ ।
तर त्यो निरङ्कुशताको पक्ष तिमीलाई स्वीकार्य छ । मलाई छैन । म त्यो कायरताको पक्षमा लड्ने पनि छैन । तर यो सिरको सिन्दुर र यी दुई सन्तान बाहनाका होइनन् नि ?
तिमी परदेश हुँदा मैले भोगेका दुःख र यी दुई सन्तान हुर्काएका कहानीहरू मलाई मात्र थाहा छ । यो समाज र तिम्रो घरपरिवारले त देखे पनि नदेखेझै गरेर हिड्छन् ।
मलाई थाहा छ तिमीले घरपरिवार र यो समाजका कुरा सुनेर मलाई त्यो घरबाट कुकुर झै गल्हत्याएका हाँै । तिमी मान्छे भएर पनि मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गर्न जानेनौँ ।
मसँग टाढा भए पनि तिम्रो हात समातेर हिड्न चाहने ती सन्तानसँग बोल्न पनि सकेनौ है ? तिम्रो महानता यसरी नै चुलिँदै जाओस् । अझ अर्को कुरा पनि सुनेको अब त बिहे पनि गरिसक्यौँ रे ! नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गरेछौ । धेरै–धेरै शुभकामना ।
तर पनि गुनासो छैन । मलाई संघर्ष गरेर हिड्न यही समाजले सिकाएको छ । तिमीले भनेको सीता भएर बाँच्न सकिन । अग्नि परीक्षामा होमिन पनि मनले दिएन ।
तर तिम्रो पत्नी भएर बाँचेकै थिए आफ्नो अस्तित्वका साथ । बीचमा सपार्नभन्दा बिगार्न चाहने यही समाजको पछि लागेर अविश्वासको तार लगायौँ । केही छैन अब त अंगार ओकेलेर आगो पचाउन सक्ने भइसकेकी छु ।
अन्त्यमा विगतका सबै कहानीहरू यो पत्रमा पोख्न सकिन । किनकि तिमीलाई पनि थाहा छ त्यसैले पोख्ने कुनै औचित्य ठानिन् । सुनेकी थिए । अस्ति भर्खर नानीले बाटोमा बा भनेर बोलाउँदा फर्किएर पनि हेरेनाँै रे !
मसँग टाढा भए पनि तिम्रो हात समातेर हिड्न चाहने ती सन्तानसँग बोल्न पनि सकेनौ है ? तिम्रो महानता यसरी नै चुलिँदै जाओस् । अझ अर्को कुरा पनि सुनेको अब त बिहे पनि गरिसक्यौँ रे !
नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गरेछौ । धेरै–धेरै शुभकामना । मलाई जस्तो व्यवहार ग¥र्यौ उसलाई नगर्नु सधै, सधैं खुसी र सुखि रहनु ।
उही सम्बोधन बिनाको पत्र …।
तीजका गीतमा ‘प्रेमविवश’